Husby: ma ahan in aan iska horimaano - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Husby: ma ahan in aan iska horimaano
La daabacay fredag 31 maj 2013 kl 15.14
"Maqabo in arinta ka dhigno anaga iyo ayaga"
Soraia Guled. Foto:GabrielStein/Sveriges Radio
Abraham Gebreyuet har bott i Husby sedan 1983. Till höger reporter Gabriel Stein. Foto: Warsame Elmi/Sveriges Radio.
Fahd Luyombya, socialarbetare i Husby & reporter Warsame Elmi. Foto: Gabriel Stein/SR
Maanta barlamaanka dalka lagu qabtay dood ku sabsan rabshadahii dhawaan ka taagnaa xaafaddaha ku yaala haeeraha magaalooyinka dalkaan, rabshadahaas oo watay baabur gubitaan, dhaxtuur iyo gacan ka hadal. Arintaas oo gilgilshay sawirkii dad badan ka heysteen Iswedhen ee ahaa in dalkaan yahay dal degan oo qaniya.
Waxeyse rabshadaha daaha ka rogeen dhibaato ka dhextaagan booliska iyo dhallinyarada xaafaddaha soogalootiga ku badanyahiin. Laanta SR International ayaa gaartey xafadda Husby, xafaddas halkii rabshadaha ka bilaameen si bal aan wax uga ogaano waxa dhaliyey dhibaatada iyo sida loo xalin karo.
- Mudo asbuuc ah ayaan arkayey in ay kooxba kooxda kale eedeyneyso, siyaasiin siyaassin eedeyneysa. Dadka Iswedhishka oo eedeynaya soogalootiga, soogalootiga oo ayagana eedeynaya Iswedhishka, dhallinyarada oo ayana booliska eedeynaya, halka booliskana eedeynayo waalidiinta. Waalidkana halka ay dhinacooda ay eeda dusha ka saarayaan iskuulka. Laakiin ma jirto cid masuuliyada qaadeneysa oo ornaneysa anagaa qaladka leh, hadaba sidee aayaa halkaa looga dhaqaqi karaa, ayuu isweydiyey Fayd Luyombya.
Fayd waxaan la kulaney maalin cadceed ah isga oo ku sugan barxada Husby oo ay biyo ka burqanayaan. Xafaaddaan oo asbuuc ka hor ay buuxdhaafiyeen saxaafiyiin ka socdey warbaahinta caalamka oo dhan ayey maanta adagtahay in mid kamid ah ishaado qabato. waxaadse ishaado qabaneysaa madxafka xaafadda oo muraayadahisa jabjabsanyahiin oo koola layskula dhadhajiyey. Balse xaafadda inteda kale wax weliba waa caadi. Barxada xaafada waxaa ku arkeysaa dad fadhiya oo sheegeysanaya jalaatana cunaya.
Laakiin in ay xaafadda ka jirto weli xaalad kacsanan ah shaki kuma jiro, taasna dhacdooyinkaa asbuucii hore ay marqaati marag ma doonto ah u tahay. Dhowre mar ayey dhallinyaro xaafadda ah booliska u geysteen dhaxtuur, halka booliska dhakiinsa lagu eedeyeey in ay dhallinyarada u adeegsadeen xoog xad dhaaf ah ugu yaraan maalmahii ugu horeeyey oo ay xaafada rabshadahu ka bilowdeen. Dadka xaafadda qaarkod ayaa sheegey in ay marqaati u noqdeen booliska oo dhallinyarada u adeegsanayey erayo ay ku dheehantahay cunsinimo iyo aflagaado.
Balse dhibaatada u dhaxeysaa booliska iyo dhallinyarada ayaa intaas ka qotodheer kana facweyn, sidaas waxaa yeri Fayd Luyombya. Waxuu kamid ahaa dadkii aasaasey dhaowre sanno ka hor xarunta Reactor oo ah xarun ay dhallinyarada xaafadda xilliga firaaqada ku caweeyaan. Maantase waxuu ka howlgalaa shirkada caawisa dhallinyarada ku sii siqaya dambiilanimada.
- Dhallinyarada aan caawiyo wax kalsooni ah uma hayaan booliska.
- Booliska waxey qabsadaan waajibaadkooda boolsinimo, mararka qaarna xoog xad daaf ah oo laga roonyahay ayey adeegsadaan. Waxaan qabaa in ay yahiin arimahaas kuwo dhaliyey gilgilashada dhallinyarada xaafadda. Hadaanan wax dhibaato ah sameynin maxaa markasta isha layla raacayaan sida in aan ahey danbiilo?
mid kamid ah dadkii xilligii rabshadaha socdeen xaafadda habeenkii ku wereegayey Husby si ay xaalada u dejiyaan waa Hussein Al Asadi oo asaga ku nool xaafadda Tensta. Waxuu qabaa in la fahmi karo carada badan ee lagala horyemid booliska.
- Booliska silcis badan ayuu u geystey dhallinyarada, waxay dhibeen dad aan waxba galabsan, ayuu yeri.
Laakiin waa arin fududeyse in wax weliba la yiraahdo waa cadaan ama waa madow, sidaas waxaa aaminsan Dennis Torrico oo ah socianom dhallinyarada Husby caawiya.
- Sida aan qabo booliska xaafadda xiriir fiican ayuu la leeyahay dadka Husby, ayuu yeri mar aan weydiiyey eedeymaha booliska loo jeedenayo sida uu arku, waxuu yeri markii arinto meesha xun gaartey waxeyd aheyd booliska degdega ah kuwii arinta halkaas gaarsiyey, waxuuna carabka ku adkeeyey in booliska xaafadda xiriir fiican la leeyahay dadka Husbu degan.
Maria Hummer waxay madax ka tahay booliska xaafaddaha duleedka ku yaala oo ay Husby ka tirsantahay . Mudo 20 sanno ah ayey boolis aheyd. Intii ay booliska aheydna waxey xaafaddaha duleedka kuyaal ku aragtey labo arimood oo marba marka ka denbeysa soo kordhaysey, midi waa xiise isa soo taraya oo ay dadka xaafaddahaas degan u qabaan booliska midna waa cadowtinimo faro badan oo ay u hayaan booliska kuwa aan booliska jecleyn.
- Kuwo aan naga helin hadalo adag ayey booliska u adeegsadaan, waa arin cool ah in booliska la nibcaado. Laakiin hadii aad sii weydiisid maxey tahay waxaad booliska ku necabtahay ma heleysid jawaab ku qancisa , ayey tiri Maria Hummer.
Maria ayaa sidoo kale sheegtey in ay ayaduna ay maqashey eedeymaha la xiriira in booliska isticmaaley awood xad dhaaf ah iyo eriyo cusurinimo ku dheehantahay oo ay booliska u adeegsadee dadka xaafadda Husby. Hadii arimahaas run yahiin ma ahan kuwo la aqbali karo ayey tiri waxeyse ugu baaqdey dadka arintaas loogeystey in ay dacwo ka soo gubiyaan.
Suraia Guled waxey kamid tahay ururka gabdho aasaaseen oo la yiraahdo Streetgräis oo laga abaabuley husby intii rabshada socotey si xaalada loo dejiyo. Suraia ayaa aaminsan in la gaaray xilliga la joojin lahaa far isku fiiqfiiqa iyo is-eedeynta oo la bilaabi lahaa sidii wax looga qaban lahaa dhibaata jirta. Suraia ayaa ka welwelsan kalo jiiditaan weyn oo maanta bulsahda ka dhextaagan.
- Ma aaminsani arinta in ay qalad iyo sax midna ku sabsantahay, waxaa qabaa in ay qalad galeen booliska iyo weliba iyo bulshadaba. Maqaba in arinta ka dhigno anaga iyo ayaga, waxaa haboon in aan dhamaantey arinta si iskumid ah wax uga qabanao ayey tiri.
Fayd Luyombya oo asag caawiya dhallinyarada ku sii sidbanaya faldenbiiyeedyada waxuu asana aaminsayahay in la joojiyo is eedeynta oo musuuliyad laysi saaro oo la hirgeliyo golaha laysku dhageysto oo ay dhallinyarado ka qayb qaadan karaan booliskana ku dhageysan karo bulshada inteeda kale, waxuu sidoo kale aaminsayahay in ay haboonaan la heyd in booliskacshaqaalahooda ka qorta dadka xaafadda degan oo dadka iyo dareenka wax kala socda.
- Hadii dhallinyarada arkaan booliis asana xaafadda ka soojeeda oo shaqadiisa qabsanaya markaas dhallinyarado way fahmi karaan oo uma caroonayaan, asana waa fahmi karaa habdhaqanka dhallinyarada xaafadda, mark waxaan aad u taagersanahay in dadka xaafadda in ay booliska qortaan, ayuu yeri Fayd Luyombya oo ka howl-gala xaafadda Husby.
Warsame Elmi/Gabriel Stern &Anders Ljunberg
Husby: "Vi ska inte kämpa mot varandra"
fredag 31 maj 2013 kl 12.30